Uma uchitha isikhathi esiningi ehlezi ngemuva qapha ke udinga computer izihlalo. Ngokungafani nozakwabo ezivamile sokhuni, situlo ehhovisi ivumela imisipha ukuba bagxile emsebenzini. Ohlezi kuso, uzoba ngaphansi ukhathele, futhi ngenxa yalokho, umsebenzi xaxa futhi ngokushesha. esihlalweni ikhompyutha Modern has emuva wamathambo, okususa ukungezwani emgogodleni, kuba nomphumela omuhle hhayi kuphela ukusebenza kodwa futhi impilo uhlelo zemisipha iyonke. By ukuthenga esihlalweni kufanele yasithatha ngokungathí sina, ngoba uzokhetha kuzoncika impilo yakho ikusasa kanye nokusebenza. ikhompyutha esihlalweni kukhethwe kahle kuyoba owusizo emsebenzini. Kulesi sihloko, sizokubonisa indlela ukukhetha izimfanelo ayadingeka ukuze isisebenzi ehhovisi ngalinye.
Ngaphambi kokuthi uthenge, unqume ukuthi imodeli akhethiwe sici backrest ukulungiswa, kanye elawula izingxenye esihlalweni futhi yokubeka ukujula. Lezi zici kuyokusiza ukuba ulungise isihlalo umzimba wakho ukuma nesisindo. Futhi banake izinto, okuyinto ke lisuke limbozwe. Kungcono ukuthenga imodeli ukuthi imbozwe izindwangu zemvelo kuphela. Lesi sici ugwema ukungakhululeki ehlobo. Buza umdayisi ngabe imodeli ifakwe indlela ekhethekile ezivumelanisiwe. Uma kungenjalo, lokhu esihlalweni is nokhishwe kusukela uhlu lokukhethwa kukho efanelekayo. indlela evumelanisiwe kakhulu kuthinta ukusebenza, ngoba ikuvumela ukulungisa ukuphakama enyakazayo kwesitulo emuva kanti ukuze ukuphakama yakho kanye nesisindo. ukuthola kwalo kungenzeka ngokushesha ngangokunokwenzeka wahlala phezu kwesitulo. Uma uzwa ukuthi kukhona emuva kancane springy, uyazi - lokhu imodeli has leli thuluzi. Ngokulandelayo, sinake ukuthi it has a ukuqina kancane Esihlalweni lumbar eguqa indoda. Uma ukuma ezingemuva backrest olufana zonke izakhiwo womuntu yokwakheka, ngeke usakwazi ubuhlungu kabuhlungu emgogodleni, okuyinto ebaluleke ikakhulu ngemva ukusetshenziswa isikhathi eside.
Uma uchitha at computer amahora 3 noma ngaphezulu ngosuku, ukuthenga kuphela labo ongakhetha ukuthi abe headrest ekhethekile. Leli lungiselelo kuzokuvumela uphumule Imisipha yentamo yakho, kanjalo uvimbele ukudala ezinye okuvela bekhanda ekupheleni kosuku zokusebenza. Nakekela ukuthi kwesitulo ikhompyutha kwaba ukumelana kakhulu ukudluliselwa. Castors Okungenani abahlanu Kufanele ube yesimanje ikhompyutha izihlalo, intengo okuyinto ihlukile ezinye izinketho ngendlela enkulu. Nale design, ungalungisa isikhundla ukuphakama esihlalweni endaweni awulutho, okungukuthi zingakutholi ke.
Indlela ukukhetha esihlalweni ikhompyutha izingane?
Uma ufuna ukuthenga isihlalo ingane yakho, kubalulekile ukuba acabangele esinye isici: ngesikhathi usana ehlezi esihlalweni, imilenze yakhe musa dangle ukusuka phansi enhlabathini. Uma kukhona isici okufana, zikhetheleni kuye model enezingane ezinezidingo ezikhethekile sika. Yehluka ezigxilile ukuthi abe ekhethekile footrest. Kungenjalo, imilenze womntwana ndikindiki, uyozizwa kubonakala kuphatheke kabuhlungu kakhulu.
Udonga Modern egumbini: izinhlobo kanye nezici
Ukungezwani komphakathi emphakathini